उपचार खर्च नतिर्दा बिरामी बन्धक बनाउने जेनस अस्पतालले १२ लाख नलिने, पैसा तिर्ने चिन्ताबाट मुक्त भए गरिब सुरजका परिवार – Nepali Profile
उपचार खर्च नतिर्दा बिरामी बन्धक बनाउने जेनस अस्पतालले १२ लाख नलिने, पैसा तिर्ने चिन्ताबाट मुक्त भए गरिब सुरजका परिवार
Posted on September 7, 2018 by रोशन राना
रुपन्देही, २२ भदौं । उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक बनाइएका सुरज बिकको उपचारमा लागेको १२ लाख रुपैयाँ बुटवलको जेनस अस्पतालले नलिने भएको छ। प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपचार खर्चमा लागेको उक्त खर्च नलिन र भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि अस्पताल सञ्चालनको लागि दर्ता अनुमति र अहिलेसम्मको काम कारबाहीको बिस्तृत बिबरण सहित मन्त्रालयमा हाजिर हुन जेनस अस्पताललाइ निर्देशन दिइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुबैपक्ष बिच भएको छलफलपछि शुल्क नलिने सहमति भएको समाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमाशंकर चौधरीले बताए।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछि ०७४ जेठ १४ गते बुटवलको जेनस अस्पताल भर्ना भएका नवलपरासी भर्तापुर–१, मिठ्ठाका २२ वर्षिया सुरज विक उपचार शुल्क तिर्न नसकेपछि अस्पतालमै राखिएका थिए। केही समयअघि उनको उद्धार गरी घर फर्काइएको हो। छलफलमा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक डिलबहादुर मल्ल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख केयर सिङ गोदारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी लिइएको थियो।
बुटवलको अस्पताललाइनमा रहेको जेनस २४ बेडको अस्पताल हो । अस्पतालकी सञ्चालक डा. शारदा सिंहले धेरैजना बिरामी आउने भएकाले सबैलाई निःशुल्क गर्न नसकिने बताउँदै आएकी छिन् । आफूहरु सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पतालले सेवा दिएको बताइन्।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पताललाई शरिर बन्धक मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्नेमा पैसा दिने भनेर उल्टो सहमति गरिनु राम्रो नभएको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य र प्रहरी प्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरे । ‘यो पहिलो चेतावनी हो जेनसमात्र होइन, अरुको अबस्था पनि बुझ्दै छौं । प्रदेश सरकारको नितिनियम भित्र रहेर काम नगर्नेलाई कारबाही गरिनेछ,’ मन्त्री बरालले भने। उनले अस्पतालमा समस्या भए सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आएर बिकल्प खोज्न सकिने बताए । निजी अस्पतालका पनि केही समस्या भए आफू छलफ गरिने बताए । बिक ०७४ मंसिरमा डिस्चार्ज भए पनि १२ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि अस्पतालमै राखिएका थिए।
बेरोजगार हुनुहन्छ ? नेपाली सेनाले माग्यो दुई सय जना सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट (सूचनासहित)कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई खुशीको खबर, अब कतार छोड्न रोजगारदाताको अनुमति लिन नपर्ने